Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti! | Yeni Antlaşma Bakanlıklar ile Aarsaa Kakuu şube
← Hojjenna Wuyi Waaqayyoof
Yoo meselesi olarak Jalqaba Jecha mana jedhu duree irraa fudhannee ilaalle olarak: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan ISAAA hakkında jijjirama olduğunu.
Mana qulqulummaa jechunis wanti kolon jiraatu jechuudha in sütununda yookin ka'amu ulusal kayabalığı qulqulluun. Manni Veli kan akka ni o Waaqayyo hubbana bir e gaafatummaa abbummaan immoo BİT yapmak qulqullummaa. Maaliif jenne yoo gaafannee ‘ani qulqulluudha’ jedhe ofi isaaf kan dhugaa ba’e Waaqayyo qofa waan ta’eef. Haa ta’u malee Waaqayyo akka isaatti qulqulluu akka tanu yeroo hundumaa ni barbaada. Kanaaf akka ani qulqulluu ta’e isinis qulqulloota ta’a jedhe kan nu abboomeef.
Akkuma Waaqayyo nu jaallate nus Waaqayyoon ni jaallannaa ree? Dubbiin Waaqayyo garu: ‘Eenyu illee yoo na jaallate dubbii koo immoo ni rawwata, jaallata babası ile abbaan immoo; nuyis (Su, Abbaa, Hafuura Qulqulluu) isa bira ni dhufna, iddoo 'kendilerini Bira ni Godhana jireenyaas (Yoh.14:23). Sagaleen kun akka nu barsisutti Waaqayyoon warra jaallatan, sagalee isaa rawwachuudhan, Waaqayyo iddoo buufata isaa, iddoo jireenya isaa ni godhata jechuudha. Waaqayyo akkuma maqaa isaa bakka qulqulluu jiraata. ’Manni qulqullummaa Waaqayyo immoo Waaqayyoolii tolfamanii wajjin walii galtee malii qabu? Waaqayyo jiraatadha, nuyis mana qulqulluummaa isaati.’
Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti! — 4 Yorumlar
Addisuu Baqqalaa üzerinde Temmuz 18, 2015 az 10:15 at bahsedilen:
deriba fufa üzerinde Mayıs 10, 2015 az 6:44 at bahsedilen:
deriba fufa üzerinde Mayıs 10, 2015 az 6:38 at bahsedilen:
Bultuma Itana üzerinde Mart 12, 2015 az 5:39 at bahsedilen: